Raha araka ny fantatra mantsy dia efa mahatratra 6 ireo olona mitondra ny covid 19 amin'izao ao an-toerana ka samy handray ny fepetra mifandraika amin'izany ny kaominina tsirairay avy. Hisy ny olona hanara-maso ny eny ifotony hiara-kiasa amin'ny sefom-pokontany sy ny komitin'ny loharano hijery ireo olona tsy manara-dalàna. Ho an'ireo Fokontany na faritra misy olona marary dia hisy mihitsy ny marika apetraka amin'ny alalan'ny loko mena na mavo hahafahana mifehy ny aretina. Ho henjakenjana kokoa moa ny fepetra horaisina ho an'ireo kaominina be mponina toa an'Ankadikely, Sabotsy Namehana... Entina manao asa fanasoavam-bahoana any amin'izay toerana voafaritra hanavana izany moa ireo tsy manao aron-tava. Nisy ny fivoriana notanterahin'ireo tompon'andraiki-panjakana isan-tsokajiny ao anatin'ny distrikan'Avaradrano omaly.Tsiahivina moa fa nanomboka omaly ny fisoratana anarana ho an'ireo olona marefo hahazo ilay tosika fameno ho an'i Sabotsy Namehana.